Google Inotangisa Zvitsva Zvimiro zveiyo Mifananidzo App | IPhone nhau
Google inosuma maficha matsva eiyo Mifananidzo app
Nezuro musangano wevagadziri wakaitirwa umo vakomana vemuMountain View vakaburitsa zviri pamutemo vhezheni inotevera yeApple, Android 8. Asi seApple, zvakatora mukana wekuvhurwa kwemisangano yekuvandudza ratidza zvinotevera mabasa anozosvika kune mamwe ese ekushandisa uye masevhisi ayo iyo kambani inopa zvachose mahara. Google Mifananidzo yave, nekufamba kwenguva, imwe yemhinduro dzakanakisa dzekugara uine kopi yekuchengetedza yeedu ese mafoto nemavhidhiyo aripo, kopi iyo inotibvumidza kudzima zvirimo zvemudziyo wedu kuti tiwane imwe nzvimbo, yakanaka kune 16GB zvishandiso. Mumazuva mashoma sevhisi iyi inogamuchira matatu matsva mabasa, mabasa anodikanwa kwazvo nevazhinji vashandisi.
1 Nhau huru dzeGoogle Mifananidzo
1.1 Kugoverana Kugovana
1.2 Kugoverana Raibhurari
1.3 Photo Mabhuku
1.4 Smart Shanduro
Nhau huru dzeGoogle Mifananidzo
Google yakazivisa chete inotevera nhau ichauya kubva paruoko rweGoogle Mifananidzo, asi parizvino hatizive kuti ichave iripo riini, asi zvese zvinoratidza kuti ichave vhiki inotevera apo vese vashandisi veIOS uye Android vachakwanisa kunakidzwa nenhau idzi.
Google yakaisa huchenjeri hwekushandisa kuti ipe mabasa matsva senge mukana wekuratidza kuti ndeapi mifananidzo atinogona kugovana. Sekureva kweGoogle, isu hatigovane mapikicha akakwana, kunyanya iwo anoshamisa, asi tinoda kuachengeta zvakachengeteka pafirimu redu. Kutenda kune Yakagadziriswa Kugovana Google ichatizivisa kuti ndedzipi dzinonyanya kutora mifananidzo, inotora iyo yatinogona kugovana neshamwari dzedu, mhuri kana kuiisa zvakananga pasocial network.
Iyi ficha inoshandisa huchenjeri hwekugadzira ku Ziva zviso uye uzvigovane neavo vari mumifananidzo, rakanakira basa patinoenda parwendo rweboka uye patinodzoka tinoda kutanga kugovana mifananidzo yatakatora iyo yatinoonekwa.
Seizvo zita rinoratidza, Shared Libraries inotibvumidza gadzira mapikicha emifananidzo atinogona kukoka vashandisi vakasiyana kuitira kuti vagosungirira mifananidzo yavo, yakanaka, senge yapfuura basa, nekuti patinoenda parwendo rweboka, kupemberera zuva rekuzvarwa, muchato ... Mifananidzo yese yakawedzerwa kune ino gallery inogona kuwedzerwa yakananga kualbum yedu, asi kare isu tinofanirwa kukumbira mvumo kubva kumunhu akavagovana.
Kunyangwe iwo echinyakare mapikicha maAlbum akakanganikwa kwenguva yakati, kuchine makambani anotibvumidza kuti tigadzire zvirinyore mapikicha emifananidzo kuti tinakidzwe nekurangarira kwedu nekukasira tisina kutsvaga pane smartphone kana komputa. Photo Mabhuku ndiyo sevhisi nyowani yeGoogle inotibvumidza Tora kopi yakaoma uye yakasungwa yemifananidzo yedu yaunofarira kutanga pa $ 9,99. Kuti tigadzire isu tinongofanirwa kusarudza maalbubhu atinoda kushandura kuita fomati yemuviri kana kusarudza mifananidzo iri mubvunzo.
Hunyanzvi hwekuchengetera hunotibatsira kusarudza zvakanakisa zvabatwa, zvichitidzivirira kubva pakuwedzera madziro kana kudzokorora mifananidzo. Pari zvino basa idzva iri rinogumira kuUnited States kunyangwe Google ichiva nechokwadi chekuti munguva pfupi iri kutevera ichave ichiwanikwa mune dzimwe nyika. Kamwe patinogadzira iyo albha, zvinotora Google angangoita mavhiki maviri kuti titumire iyo yakagadzirira-yakagadzirwa album
Google yakaisawo huchenjeri hwekushandisa kuti utibatsire kugadzirisa edu mafoto. Nenzira iyi zvichatibatsira deredza zviyo mumifananidzo kukanganisa mamiriro emifananidzo ... zvese izvi otomatiki, pasina kuita chero chinhu.
NeGoogle Lens, yako smartphone kamera haingowone zvaunoona chete, asi zvakare inonzwisisa zvaunoona kuti ikubatsire kutora matanho. # io17 pic.twitter.com/viOmWFjqk1
- Google (@Google) Dai 17, 2017
Kunyangwe iri chikamu cheGoogle Mubatsiri, Google Lens ichave iripo kuburikidza neGoogle Mifananidzo. Google Lens inotibvumidza kuona zvinhu mumifananidzo yatinotora, sekugona kunoita Samsung Bixby mubatsiri. Kutenda kuGoogle Lens isu tinogona kukurumidza kuona zvivakwa nezvivakwa kuti tiwane rumwe ruzivo nezve izvo. Tichitora mufananidzo weresitorendi, tinogona kukurumidza kuziva maawa, ruzivo rwekuonana, nzvimbo dziripo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google inosuma maficha matsva eiyo Mifananidzo app
D-Link Omna 180 HD, kamera yekuongorora yeKeKKit
Amazon inoderedza mahwendefa ayo kuyedza kudzosera musika